Ishadi elikhulu eliPrintweyo kunye neTyhafile engamakhulu
Imidlalo, iiPuzzle, kunye nokuQaphela iPatheni kunye neTrart
Ikhulu leshadi liyimithombo yokufunda ebalulekileyo ekuncedeni abantwana abancinane ngokubala ukuya kuma-100, kubalwa ngama-2s, 5s, 10s, ukuphindaphinda, nokubona iipateni zokubala.
Unokudlala ukudlala umdlalo kunye nabafundi ngokusekelwe kumakhulu ayi-sheets of worksheets , okuba umfundi azalise wona ngokwabo, okanye unokwenza uprinte ikhetshi eyikhulu ekhethwe ngawo onke amanani.
Ukusetyenziswa rhoqo kweleta lesibini ukusuka kwi-kindergarten ukuya kwibanga lesi - 3 kusekela ezininzi iingcamango zokubala .
Uncedo Ngokujonga Amaphetheni
Sebenzisa i-chart ekhethiweyo okanye ucele abafundi bakho ukuba bazalise zabo. Njengoko umfundi egcwalisa kwitshathi, umntwana uya kuqala ukubona iipateni zivela.
Unokubuza umbuzo othi, "Yenza isangqa ngokubomvu amanani kwiesati ephela" 2. "okanye, ngokufanayo, faka ibhokisi ebhakabhile ujikeleze onke amanani aphelile" 5. "Buza into abone ngayo nokuba kutheni becinga ukuba kwenzeka ntoni Phinda nenkqubo ngeenombolo eziphela "0." Thetha malunga neepatheni abazibonayo.
Unokubanceda abafundi basebenzise amatafula abo okuphindaphinda kwiitshathi ngokubala ngo-3s, 4s, okanye nayiphi na umphindiseli kunye nombala kula manani.
Ukugcina ephepheni, unako ukubonelela abafundi ngekhompyutheni yekhompyutheni yekrisiti yokufikelela ngokukhawuleza. Kukho imidlalo emininzi edlalwa kwikhadi elikhulu elinceda abantwana bafunde ngokubala ukuya kuma-100, ukubekwa, kunye nomyalelo wenani.
Iingxaki zegama ezilula ongayenza ziquka imisebenzi yokongeza, njengokuthi, "Nguwuphi na inani elingaphaya kwe-15?" Okanye, unokwenza ukukrazula, ngathi, "Nguwuphi na inani elingaphantsi kwe-10."
Ukuyeka ukudlala imidlalo kunokuzonwabisa ngendlela efanelekileyo yokufundisa umgaqo-siseko usebenzisa umakishi okanye iimali zokuhlawula zonke ii-5s okanye ze-0s. Bantwana banamagama amagama angaphantsi ngaphandle kokucima.
Efana nomdlalo onjengelizwe le-Candy, unokuba nabantwana ababini badlala ndawonye kwitshati kunye nomakishi omncinane kumdlali ngamnye kunye nedayisi.
Yiba nomfundi ngamnye aqale kwisikwere sokuqala aze ahambe ngokulandelana kwamanani ngetshathi kwaye abe nomncintiswano kwisikwere sokugqibela. Ukuba ufuna ukwenza ukongeza, qalisa ukusuka kwikota yokuqala. Ukuba ufuna ukwenza ukukhupha, qalisa ukusuka kwisikwere sokugqibela uphinde usebenze ngasemva.
Yenza iMathematika i-Puzzle
Unokufundisa ixabiso leendawo ngokusika iikholomu (ubude obude) zibe yimichilo. Unako ukuba abafundi basebenze kunye ukuze bahlaziywe kwakhona iinqhompe zibe ngeshati epheleleyo.
Ngenye indlela, unokunquma i-chart ekhulu kwiikhulu ezinkulu, njengemifanekiso. Buza umfundi ukuba awubuyisele ndawonye.
Ungadlala umdlalo obizwa ngokuthi "Too Big, Too Small," kunye neqela elikhulu labantwana kunye nekhadi elikhulu. Unokusibeka phezu kwekrele elipheleleyo. Unokuyilungelelanisa inamba (yikhawule kwindawo ethile, uze uyifihle). Xelela iqela ukuba unenani eli-100 ukuya kufuneka liqikelele. Umntu ngamnye ufumana ithuba lokuqiqa. Banako ukuthetha nganye inombolo enye. Okukuphela kwenkcazelo oza kunika, "kakhulu kakhulu," ukuba inani lidlula inombolo ekhethiweyo, okanye "encinci," ukuba inani lingaphantsi kwenani elikhethiweyo. Ngaba abantwana banamanqaku kwikhulu labo batya amanani anqatshelwe ngeenkcukacha zakho "ezinkulu kakhulu," kwaye "zincinci."
I-Chiral Centre Inkcazo kwiKhemistry
Iphrofayili yeMdlalo: iCrappie
Ukuqalisa ngeePolfoliyo zabafundi
IYiputa yaseYiputa: Ixesha lePredynastic
Ukukhutshwa kweNjini yeTeam